Ciidamada Itoobiya oo xabsiga dhigay weriye C/Maalik Muuse Coldoon (Daawo) - Latest News Updates
Ciidamada Itoobiya oo xabsiga dhigay weriye C/Maalik Muuse Coldoon (Daawo)
Ciidamada Federaalka Dowladda Itoobiya ayaa gacanta ku dhigay Weriye C/Maalik Muuse Coldoon iyo koox weriyeyaal ah xilli ay ku sugnaayeen magaalada Gaashaamo oo ka tirsan gobolka Jarar ee dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya.
Wararka ayaa sheegaya in xarigga weriye Coldoon uu la xiriiro dembiyo culus oo lagu soo eedeeyay, kuwaasi oo uu ku muteysan karo xabsi adag iyo ciqaab weyn, inkasta oo aanay weli wax war ah ka soo saarin maamulka ka arrimiya magaalada Jigjiga ee DDSI iyo dowladda dhexe.
Nabadoon Axmed Warsame Cabdulle oo ka mid ah waxgaradka degmada Gaashaamo ee gobolka Jarar ayaa ka warbixiyay qaabka lagu xiray Weriye C/Maalik Muuse Coldoon iyo weriyeyaal kale oo la socday, isagoona sheegay in maalintii shalay ay magaaladaasi ka qabteen ciidamada Liyuu Boolis ee hoos taga maamulka Madaxweyne Mustafa Cagjar.
Waxa uu sheegay in weriyaha uu ka soo jeeda degaanka Gaashaamo, isagoona sheegay in Madaxweynaha dowladda ismaamulka Soomaaliya Itoobiya Cagjar uu u diray gaari geeya magaalada Jigjiga, iyadoo ciidamada Liyuu Booliska ay wareysanayeen shacabka ku dhaqan degaanka iyagoona weydiinayay su’aalo ku saabsan booqashada Weriye C/Maalik Muuse Coldoon.
Arrimaha lagu eedeeyay Weriye Coldoon waxaa ka mid ah inuu xiriir la lahaa madaxda sare ee urur lagu magacaabo Heego isla markaana dhowr goor taleefano kula hadlay xubnaha sarsare ee ururkaasi.
Nabadoon Axmed Warsame Cabdulle ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya lagu wareejiyay maanta, hase yeeshee waxaa kale oo ka mid ah dembiyada lagu eedeeyay inuu degaanka Soomaalida ka waday olole la isaga hor keenayo shacabka iyo maamulka DDSI.